Download Iphupho League Lezinyawo 2018 Apk Zakamuva Version Game For Amadivaysi Android - ApkZip.com
ibhola lebhola lebhola
Dream League Soccer 2018 ilapha, futhi kungcono kunanini!
4.6 (91.6%) 12,101,373 Amavoti
Lungela inkathi entsha yesenzo sekhwalithi eliphezulu - I-Dream League Soccer ilapha! I-Soccer njengoba siyazi ukuthi ishintshile, futhi lena yithuba lakho lokwakha ithimba elihle emhlabeni. Thola ama-superstars anikezwe yilayisensi yangempela ye-FIFPro ™, yakha inkundla yakho, futhi uthathe i-World nge-Dream League Online njengoba uhambela phambili enkazimulweni, endleleni yakho eya ku-Soccer Stardom!
Landa i-Dream League Soccer mahhala manje!
YENZISA I-TEAM YAKHO IMGOMO
Abadlali be-Super top abafana neGareth Bale ukudala i-Dream Team yakho siqu! Khetha ukubunjwa kwakho, isitayela sakho esiphelele futhi uthathe noma yiliphi iqembu elima endleleni yakho njengoba uphuma nge-6 Leagues phezulu e-Elite Division ehloniphekile. Unayo yini lokho okudingekayo?
I-GAMEPLAY ENTSHA EYENZIWEYO
Yilungiselele i-AI ehlakaniphile, i-tactical ukwakha isipiliyoni esinzima nokulutha umlutha. Ngayo yonke imibono emisha, izithombe ezingokoqobo kanye ne-gameplay eqinile engu-60 (amadivaysi ahambisanayo kuphela), i-Dream League Soccer iyinhlangano ephelele yebhola lezinyawo ezithatha isisekelo sangempela somdlalo omuhle.
I-Dream League Online ibeka ithimba lakho le-Dream ngokumelene nokuhle kakhulu emhlabeni. Sebenzisa indlela yakho ngokusebenzisa izinkampani ukufakazela ukuthi ithimba lakho likhulu kakhulu! Imicimbi evamile yegijimi igxotha ithimba lakho ngokumelene nokuhamba phambili kwezingqikithi ezihlukahlukene zemiqhudelwano. Funa ukunqoba ukunqoba imiklomelo ehlukile kanye nemindondo.
• Abadlali abanelayisensi ye-FIFPro ™ baletha isipiliyoni esiyiqiniso kakhulu se-Dream League Soccer ezandleni zakho!
• Ukhululekile ukudala, ukwenza ngokwezifiso nokulawula i-Dream Team yakho siqu!
• Ukuhlukana oku-6 ukusebenzela indlela yakho, kanye nemincintiswano engaphezu kwe-7 ye-Cup!
• Bamba iqhaza kwimicimbi ebukhoma evamile ukuze uzuze imiklomelo nodumo!
• Yakha inkundla yakho siqu ukukhombisa ama-superstars akho!
• Thuthukisa abadlali bakho ngokunembile nangenhloso
• Izinhloso zezinkathi zokugcina uhlanganyele futhi ubuya!
• Impumelelo ye-Google Play & amabhodi wabaphambili ukuze ubone ukuthi ubani ophezulu!
• Yenza ngokwezifiso bese ungenisa imikhiqizo yakho namagogo akho!
• Vumelanisa inqubekelaphambili phakathi kwamadivayisi nge-Google Play Cloud!
• I-soundtrack ekhethekile ehlinzekwa yi-State Luka, Sunset Sons, BETSIE GØLD, Jack Wins, Vistas & Only The Poets!
* Lo mdlalo ukhululekile ukudlala, kodwa okuqukethwe okungeziwe nezinto ezingaphakathi kwemidlalo zingathengwa ngemali yangempela.
* Lolu hlelo lokusebenza lusebenzisa i-Wi-fi noma idatha yeselula (uma ikhona) ukulanda okuqukethwe komdlalo nokukhangisa. Ungakhubaza ukusetshenziswa kwedatha yeselula kule geyimu kusuka ngaphakathi kuzilungiselelo / izimboni zeselula.
* Lolu hlelo lokusebenza luqukethe ukukhangisa komuntu wesithathu. Ukukhangisa okungafundwayo kukhutshaziwe uma uthenga ngemali yemidlalo esitolo.
VELA US: www.ftgames.com
NJENGOBA US: facebook.com/dreamleaguesoccer
BUKA US: youtube.com/firsttouchgames